श्रीमान्ले दिएका अनगिन्ती दुःख:-नायिका मौसमी मल्ल　| मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
श्रीमान्ले दिएका अनगिन्ती दुःख:-नायिका मौसमी मल्ल　Posted on फ्रेवुअरी 14, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	आर्मी परिवारमा जन्मिएकी हुँ म　। सानैदेखि खेलकुद क्षेत्रमा रुची थियो　। खेलाडी बनेर देशविदेशमा नाम कमाउने सपना देख्थँे　। माध्यमिक तहमा पढ्दै गर्दा एथलेक्टिसको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न पनि सफल भएँ　। खेलबाहेक नृत्यमा पनि मेरो राम्रो दक्खल थियो　। तर, हिरोइन बन्ने सपना भने थिएन मेरो　। फिल्मी क्षेत्रमा म मौसमी मल्ल भनेर चिनिए पनि मेरो खास नाम विष्णु ठकुरी हो　। चितवन जिल्लामा अहिले पनि खेलाडी विष्णु ठकुरी भनेर मलाई चिन्ने धेरै छन्　। बिहे गरेर पोखरा गएपछि म नायिका बनेँ, नायिका मौसमी मल्ल　। बिहेपछि मेरो अभिनययात्रा सुरु भयो　। यससँगै मेरा संघर्ष र दुःखका दिन पनि सुरु भए　। त्यसबेलादेखि सुरु भएका संघर्ष र दुःख अहिलेसम्म जारी छन्　। यिनले मलाई भोलि छोड्ने छैनन् भन्ने लाग्छ　। *** म घरको एक्लो सन्तान, बाआमाले दस कक्षामा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा नै पोखराको केटासँग बिहे गरिदिनुभयो　। पन्ध्र वर्षकी केटीलाई श्रीमती र बुहारीको जिम्मेवारीबारे के नै थाहा हुन्छ र ? अहिले यस्तो लाग्छ- त्यो बिहे मेरो बालापनको हरण थियो, मेरो हाँसो-खुसीको अपहरण थियो　। स्कुले पोशाकमा सजिएर साथीसँगीसँग हाँसखेल गर्दै स्कुल जानुपर्ने उमेरमा मैले सिन्दूर/पोतेमा बाँधिएर ‘घर’ गरिखानुपर्‍यो　। तर, बाआमाप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन　। उहाँहरूले मेरोे राम्रो नै सोच्नुभएको थियो　। दाम्पत्यजीवन भनेको के हो ? प्रेम केलाई भनिन्छ ? यस्ता कुरा थाहै नपाई म बच्चाकी आमा भएँ　। एस.एल.सी परीक्षा दिँदा मेरो पेटमा बच्चा थियो　। अरूहरूजस्तै स्वतन्त्र भएर परीक्षा दिन पाएको भए मैले कति राम्रो नतिजा ल्याउँथे होला भन्ने लाग्थ्यो　। तथापि, मैले एस.एल.सी राम्ररीनै पास गरेँ　। *** २०४० सालमा बी.एस. थापाले निर्देशन गरेको ‘कान्छी’ फिल्ममा बच्चाको भूमिकाबाट अभिनय सुरु गरेँ　। त्यसबेला मेरो चार महिनाको छोरो थियो　। राम्रो नृत्य गर्न सक्ने बच्चीका रूपमा मैले चितवनमा परिचय बनाएको थिएँ　। म चितवनबाट बिहे गरेर पोखरा आएको थाहा पाएपछि निर्देशक थापाले मलाई खोजेर त्यस फिल्ममा खेल्ने अवसर दिनुभएको हो　। त्यसबेला मैले परिवारमा निकै संघर्ष गरेरमात्रै फिल्म खेल्न पाएँ　। श्रीमान्को जागिरको कारण पोखरामा एक वर्ष बसेपछि काठमाडौँ आए　। काठमाडौँ आएपछि कलेज पढ्ने रहरले पद्मकन्या कलेज भर्ना त गरेँ, तर त्यसबेलासम्म दोस्रो बच्चा भइसकेकाले पढ्ने रहर पूरा हुन सकेन　। सँगैका साथीहरू कलेज पढ्न गएको देख्दा मलाई पीडा हुन्थ्यो　। काठमाडौँ बस्न थालेको चार वर्षपछि निर शाहले निर्देशन गर्नुभएको पच्चीस वसन्तमा दोस्री नायिकाको रूपमा अभिनय गर्ने अवसर पाएँ　। यसमा अभिनय गरेपछि एकाएक मेरो माग बढ्यो　। मैले ‘भाग्यरेखा’, ‘तिलहरी’, ‘भुमरी’ गरी आधा दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेँ　। तर, सिनेमाको पर्दामा जुन भूमिका गरिरहेको हुन्थेँ, वास्तविक जीवनमा पनि म त्यही भूमिकामा थिएँ　। अर्थात्, फिल्ममा शोषणमा परेको पात्रको रोल गरिरहँदा वास्तविक जीवनमा पनि म घरेलुहिंसाबाट पीडित भइरहेकी हुन्थेँ　। काठमाडौँमा सुरुका एकदुई वर्ष त श्रीमान्बाट राम्रै माया पाएँ । तर, पछि श्रीमान्मा एकाएक परिवर्तन आयो　। त्यसपछि म श्रीमान्बाट अनेकौँ प्रताडना सहन बाध्य भएँ　। श्रीमान्बाट धुस्नो हुनेगरी कैयौँपल्ट चुटिएँ म　। अन्य दुव्र्यवहारका त के कुरा गर्नु र ? श्रीमान्लाई म र दुईवटा छोराभन्दा अर्कै प्रेमिका प्यारी भइसकेकी थिइन्　। सानातिना कुरामा पनि उनी मलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन्थे　। ‘बाहरवाली’ सित रंगिन जीवन बिताउन थालेपछि ‘घरवाली’ को अनुहार देख्यो कि रिस उठ्दोरहेछ श्रीमान्हरूलाई　। मेरो श्रीमान् बाहरवालीको प्रेममा पागलनै भएका थिए　। उनलाई मेरो चिन्ता त छँदै थिएन, दुई जना अबोध छोराहरूका पनि वास्ता गर्दैन थिए　। श्रीमान्बाट भनिसाध्य नहुने पीडा पाएँ, तर पनि कसैलाई भन्न सकिनँ　। सर्वसाधारण महिला भएको भए श्रीमान्ले कुट्यो भन्दै हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो होला　। तर, फिल्मजगतकी एउटी स्थापित नायिकाले त्यसरी भन्दै हिँड्न कहाँ सक्थी र ? स्टार हुनु भनेको धेरै बन्धन र अप्ठ्यारामा पर्नु हो　। भित्र हजार पीडा र दुःख सहनु परे पनि बाहिर खुसीको नाटक गरेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता थियो　। फिल्मी-जिन्दगी बाँचेर फिल्म खेलिरहँे　।
**** छोराहरूको भविष्यका लागि धेरै दुःख-पीडा सहेर भए पनि केही वर्ष श्रीमान्सँगै बसेँ　। यो एकप्रकारको सम्झौता थियो　। तर, जब श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याए, त्यसपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प देखिनँ　। जतिसुकै स्थापित र जतिसुकै चर्चित नायिक भए पनि आखिर म यौटी नारी थिएँ र, एउटा नारीले श्रीमान्बाहेक अरू सबै कुरा बाँड्न सक्छे　। नारीका दुस्मन नारी नै हुन् भन्ने सत्य मैले राम्ररी बुझेँ　। वास्तवमा श्रीमान्भन्दा बढी त्यस महिलाप्रति मेरो घृणा र गुनासो छ, जसले मेरो जीवन तहसनहस गरिदिई　। सम्बन्धविच्छेदअघि श्रीमान्लाई दुई छोरा र श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्री श्रीमती ल्याउनुको कारण धेरैपल्ट सोधेँ, तर उत्तर पाइनँ　। उत्तरको सट्टा यातना पाएँ　। ती दिनहरूमा मैले बेहोरेको पीडा र मैले बगाएका आँसु सम्भिmँदा मलाई अहिले अत्यास लागेर आउँछ　। तर, मैले इमानदार भएर भन्नुपर्छ- तिनै पीडा र आँसुले मलाई अघि बढ्ने ऊर्जा दिएका हुन्　। अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि उभिएको त्यो क्षण मेरो जीवनको सबभन्दा सुखद् र दुखद् क्षण थियो　। सुखद्- किनभने म श्रीमान्का प्रताडनाबाट मुक्त हुँदै थिएँ　। र दुखद् यसअर्थमा कि अब मैले समाजका अनेक प्रश्नका सामना गर्नुपथ्र्याे　। तर, श्रीमानसँग रहँदा पाएका दुःखका कारण उसबाट टाढिनु मेरा लागि पीडाको विषय भएन, अलिकति पनि भएन　। धेरै महिला श्रीमान्ले दोस्री श्रीमती ल्याएपछि पनि श्रीमान्सँगै बसेका छन्　। मलाई के लाग्छ भने ती महिला, जोसँग कुनै विकल्प हुँदैन, श्रीमान्का पीडा र यातना सहेर पनि ऊसँगै बस्न बाध्य हुन्छन्　। तर, मसँग थुप्रै विकल्प थिए　। मसँग दुई छोरा र आफूलाई पाल्न सक्ने क्षमता र साहस थियो　। त्यसैले मैले सम्बन्धविच्छेद गरँे　। ***** मैले श्रीमान्सँग नौ वर्ष बिताएको थिएँ　। यस अवधिमा एउटी श्रीमतीले श्रीमान्बाट पाउने मायाको खासै अनुभव गर्न पाइनँ　। बरु, ‘म लोग्ने हुँ’ भन्ने दम्भपूर्ण र विकारग्रस्त मनोविज्ञान भएको पतिदेव भनाउँदाहरूबाट श्रीमतीहरू कति पीडित हुन्छन्, त्यसको प्रशस्त अनुभव गर्न पाएँ　। तर, सम्बन्धविच्छेदपछि पनि मैले पीडा र प्रताडनाको शृंखलाबाट मुक्ति पाइनँ　। श्रीमान्सँग रहँदा उसबाट प्रताडित भएँ, श्रीमान्बाट छुट्टएिपछि समाजबाट प्रताडित भएँ　। पीडा दिने मामिलामा सिंगो समाज कुनै ‘टिपिकल लोग्ने’ भन्दा कम रहेनछ　। श्रीमान्सँग छुटेपछि समाज र आफन्तका मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो, आमूल परिवर्तन भनेजस्तो ! ‘कसैसँग सल्किएकी थिई होला, र त लोग्नेले छाड्दयो’ भन्न थालेका थिए मान्छेहरू　। तर, ‘त्यसको लोग्ने अर्कीसँग सल्केकाले उसले त्यसलाई छाडिदिई’ भन्ने कोही भएनन्　। श्रीमान्सँग बस्दा कामबाट राती अबेर घर फकिर्ंदा कसैले केही भन्दैनथे, तर सम्बन्धविच्छेदपछि बेलुका अलिकति ढिलो हुँदा छरछिमेक र साथीसङ्गी कुरा काटिहाल्थे　। मेराअगाडि केही नभने पनि मेरापछाडि नराम्रा कुरा गरिहाल्थे　। एक्लै भएपछि हरेक पाइला विचार गरेर चाल्नुपर्दाे रहेछ　। पहिले श्रीमान्सँग बस्दा मलाई चरित्रवान् देख्नेहरू पछि एक्लै भएपछि मलाई चरित्रहीन देखिरहेका थिए　। यस्तै हो समाज ! मान्छेहरू अरूका छोरीबुहारीलाई चरित्रहीन भनेर आफ्ना छोरीबुहारीलाई सतीसावित्री साबित गर्न खोजिरहेका हुन्छन्　। आफ्ना दुई सन्तानको भविष्य सम्झेर म समाजका शंका, उपशंका, आरोप, आक्षेपआदि सबैको बेवास्ता गर्दै अघि बढेँ　। एक्लो जीवनमा पीडा जति भए पनि केही स्वतन्त्रता भने हुँदोरहेछ　। कुनै काम गर्दा श्रीमान्, सासुससुराले के भन्लान् भनेर डर मान्नुनपर्ने ! ***** श्रीमान्सँग छुट्टएिपछि केही समय माइत गएर बसेँ　। माइती पनि श्रीमान्सँग जानु र एक्लै जानुमा फरक हुँदोरहेछ　। म एक्ली छोरी भएकाले बाआमाबाट मैले सबै खालका सहयोग पाएँ　। तर, माइतीमा बस्दा पनि समाजको मलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने उस्तै थियो　। सबैका नकारात्मक नजरबाट हुने पीडा र तनावबाट मुक्त हुन आफ्ना दुई छोरालाई चितवनमा बाआमाको घरमा छाडेर म बेल्जियमतिर लागेँ　। बेल्जियममा पनि हाइसञ्चो त कहाँ थियो र ? तर, हरेक पाइलामा सहनुपर्ने आलोचनाबाट भने म मुक्त थिएँ　। नेपालमा ब्युटिसियनसम्बन्धी काम गरेकाले बेल्जियममा पनि त्यही काम गरेँ　। बेल्जियममा चार वर्ष बसेर नेपाल फर्किएपछि एकल महिला समूहमा आबद्ध भएर महिलाहिंसाविरुद्ध काम गर्न सुरु गरेँ　। एकल महिलाका पीडा र समस्याका भुक्तभोगी भएकाले एकल महिलाको पक्षमा काम गर्न मलाई धेरै सजिलो भयो　। त्यही अभियानमा एकल महिलासम्बन्धी वृत्तचित्र बनाएर देशव्यापी प्रदर्शन पनि गरेँ　। अहिले पनि महिलाहिंसाविरोधी अभियानमा लागेर काम गरिरहेकी छु　। ***** बिहेको प्रस्ताव लिएर धेरै पुरुष आए र आइरहेका पनि छन्　। मेरी आमा पनि मलाई घरजम गरेर बस भनिरहनुहुन्छ　। तर, बिहे भन्नासाथ म आतंकित हुन्छु　। उसो त, कहिलेकहीँ गाह्रो-अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने र साथ दिने कोही भइदिए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने नलाग्ने होइन　। तर, आफ्नो ध्वस्त वैवाहिक जीवन सम्भिmनासाथ झसंग हुन्छु　। त्यसैले पुनः बिहे गर्ने कल्पनासम्म गरेकी छैन　। सम्बन्धविच्छेदपछि फिल्मीक्षेत्रबाट लामो समय हराएँ म　। एक हिसाबले पलायन भएँ भने हुन्छ　। तर, सबै कुरा मिलाएपछि तेह्र वर्षपछि फिल्म ‘गिरफ्तार’ निर्माण गरेर यस क्षेत्रमा पुनः आएँ　। मलाई मेरो जीवन पनि फिल्मजस्तै लाग्छ　। महिलाहिंसालाई समेटेर बनाइएका फिल्मका कथा मेरै कथाजस्ता लाग्छन्　। म आफँैले खेलेको ‘तिलहरी’ त झन् मेरै कथाजस्तो लाग्छ　। तिलहरीमा सानै उमेरमा बिहे भएकी एउटी महिलाले श्रीमान्बाट शारीरिक र मानसिक यातना पाएकी छे भने समाजबाट मानसिक यातना　। यसबाहेक मेरो जीवनसँग मेल खाने धेरै फिल्म छन्　। आफ्नै जीवनका घटनालाई समेटेर फिल्म बनाउने योजनामा छु　। मेरो कथा हजारौँ नेपाली महिलाको कथा हो　। मेरो कथामाथि बनाइएको फिल्म सुपरहिट नहोला र ? Like this:Like Loading...
Filed under: समचार « जमिमका हत्यारा खोज्दै भ्यालेन्टाइन डे को बारेमा जानकारी »
Bal bahadur, on फ्रेवुअरी 14, 2010 at 10:00 अपराह्न said:	नमस्कार! वास्तव भन्ने हो भने यस्ता सणेन्त्र धेरै परिवार मा हुन्छ । यस्लाई नै गिन्दगी भनिन्छ । तर मौसमी मल्ल जि को गिन्दगी फिलिमी गिन्दगी जस्तै हो रहिछ । र म भन्न चाहान्छु! मौसमी जि तपाईंको गिन्दगिलाई समेटेर फिल्म बनाउनु भयको फिल्म जरुर सफल हुनिछ । बकी त म बाट केनै सुझाब दिना सक्छु र ? God Bless u and ur family ..हो तपाईं को श्रीमानले सचैन सणेन्त्र गर्नु भयको रैछ ।
जवाफ फर्काउनुहोस् saiman, on फ्रेवुअरी 14, 2010 at 11:25 अपराह्न said:	ali badi ni marmik banauna khojey jastoo lagey ko cha